Inona no tsy mampitovy ny gorodona vita amin'ny plastika sy ny valin'ny PVC - ZD manam-pahaizana zoro
Home > Inona no tsy mampitovy ny gorodona vita amin'ny plastika sy ny valin'ny PVC
Ahitsio: Denny　2019-12-03　Mobile
Betsaka ny olona ankehitriny miantso ny gorodona valizy PVC plastika. Ny tonian-dahatsoratra ao amin'ny Yiwu Henggu Floor dia hanome anao ny siansa malaza.
Raha ny marina, ny gorodona plastika amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny polyurethane (PU). Ireo dia akora fototra ho an'ny fanatanjahantena ivelany sy ny làlamby plastika. Nampiasa tany. Ankoatr'izany, ny ankamaroan'ireny gorodona ireny dia atsipy amin'ny tranokala, tsy vita ny gorodona. Ny fanamafisana, ny gorodona plastika dia manondro ny gorodona etsy ambony, fa tsy ny gorodona PVC.
Ny gorodona PVC dia manondro ny gorodona vita indrindra amin'ny akora PVC (polyvinyl chloride), antsoina koa hoe gorodona plastika. Noho ny anarana samy hafa ampiasaina ankehitriny, misy ny sasany milaza azy io gorodona vita amin'ny gorodona, hazo fikosoham-borona, gorodona vita amin'ny gorodona, gorodona vita amina, gorodona hoditra (tokana Miresaka amin'ny gorodona coiled), ny tena anarany dia tokony ho gorodona PVC.
Ny toetra mampiavaka ny gorodona PVC: ny dingana mahasalama, ny fanoherana miady, ny anti-slip, ny insulation ny feo ary ny anticorrosion, ny loko manankarena; ny fanoherana ny hadalàna, ny fanoherana ny rano ary ny fanoherana ny fanehoan-kevitra simika. Tsy tratran'ny hetsika mekanika, fitsangatsanganana fiara ary fandriana an-trano. Ny fanoherana ny PVC anti-static dia ny 104-106 ohm, ary ny fitaovana mitondra tena dia mizara ho am-pitoviana ao anatin'ilay vokatra, koa manome antoka ny fiasa anti-static maharitra.Foton'ny gorodona: fitsaboana, fanabeazana, indostria, fitaterana, fanatanjahantena, varotra, masoivoho governemanta, birao. Shops, sns.
Ny gorodona PVC dia fitaovana vaovao misy rihana avo lenta amin'ny indostrian'ny fananganana izao tontolo izao. Ampiasaina be amin'ny tetikasa haingon-trano any ivelany. Hatramin'ny nidirany tao an-tsena an-trano tamin'ny taona 1980 dia nohazomina tamim-pahavitrihana izao.Izao no be mpampiasa amin'ny asa aman-jery (trano biraom-panjakana, toeram-pivarotana, seranam-piaramanidina,), fanabeazana (sekoly, tranomboky, kianja), fanafody (zavamaniry fanafody, hopitaly), orinasa ary indostria hafa, ary nahavita asa mahafa-po. Efika, mitombo ny habetsaky ny fampiasana.
Amin'izao fotoana izao, ny gorodona PVC dia ampiasaina betsaka ary matetika dia hita eny an-tsena an-trano.Ireo etsy ambony dia ny tsy fitovian'ny gorodona plastika sy ny valin'ny PVC.Manantena ny hanampy ny rehetra aho.
Inona no tsy mampitovy ny gorodona vita amin'ny plastika sy ny valin'ny PVC Ny atiny mifandraika
Ny fomba fananganana gorodona dia sarotra sy lafo kokoa noho ny fampiharana tile. Ny fomba fanao mahazatra indrindra dia: ny fomba fametrahana adhesive mivantana, fomba fametahana ny takelaka, fomba ...